MLBB 2ND SKIN DESIGN COMPETITION winner announcement Phase 1!
Fun Gaming Hub
WTF! Epic Comeback Hyper Hard Carry Gusion Gameplay By SKy Wee | MLBB
Congratulations to Best Design (One) and Best Popularity (One)!
Next time, we will announce Best Innovation (Three) and Best Costume (Five). Stay tuned!
လာမည်...ကြာမည်...မျှော်😊 MLBB New Hero 😲
👉နယူးဟီးရိုးရဲ့ သိရှိထားသင့်တဲ့အချက်များ👇👇 Upcoming new hero Boudicca (model + equipment + skills) the placeholder just temporary until original placeholder arrive Soon to be arrive in Advance Server Renner : Burst Damage,Lock Target Bennett : Crowd Control,AoE Wesker : Damage Nibiru : AoE
Mobile Legends M2 ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံအုပ်စုများ
Mobile Legends အတွက်အဖွဲ့များကို Bang Bang (MLBB) M2 World Championship စနေနေ့ (ဒီဇင်ဘာ ၁၂ ရက်) တွင် Live Group Draw Show တွင်အဖွဲ့ ၀ င် ၁၂ ခုကိုအုပ်စုသုံးစု ခွဲ၍ ခွဲဝေခဲ့သည်။ အုပ်စု A တွင် MLBB Pro League (MPL) မြန်မာချန်ပီယံများဖြစ်သော Burmese Ghouls၊ စင်ကာပူအသင်း RSG (Resurgence မှပြန်လည်ခေါ်ယူခြင်း) နှင့်ရုရှားအသင်း Unique Deus Vult တို့ပါဝင်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် Group B သည် SEA ကိစ္စရပ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး MPL MY / SG ချန်ပီယံ Todak သည်ဖိလစ်ပိုင်အသင်း Omega Esports နှင့်ကမ္ဘောဒီးယားအသင်း Impunity KH တို့နှင့်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သည်။ M2 ၏ 'group of death' ကဲ့သို့ပင်၊ အုပ်စု C သည် ONL Esports MPL ဖိတ်ကြားသည့်ချန်ပီယံ Alter Ego Esports ကိုသူတို့ MPLI ဖိုင်နယ်လ်ပွဲစဉ်များ၊ အပြေးသမားများနှင့် MPL PH ချန်ပီယံ Bren Esports နှင့်အစောပိုင်းပြန်လည်ဆုံဆည်းမှုကိုပေးသည်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က M1 တွင်ပါ ၀ င်ခဲ့သောဂျပန်အသင်း 10S Gaming Frost သည်အုပ်စုကိုအပြီးသတ်ရန်ဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့် Group D တွင် MPL ID ချန်ပီယံ RRQ Hoshi၊ စင်ကာပူအသင်း EVOS SG နှင့်ဘရာဇီးအသင်း DreamMax တို့ပါဝင်သည်။ M2
Mobile Legends M2 ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံရှစ်အတွက်ရက်စွဲများ
အရှေ့တောင်အာရှ၏အကောင်းဆုံး MPL အသင်းများသည် ONE Esports Invitational ၌တိုက်ထုတ်နေစဉ် Moonton သည်ဒုတိယမြောက်နှစ်ပတ်လည် Mobile Legends World Championship အတွက်ရက်စွဲကိုကြေငြာခဲ့သည်။ M2 ကိုစင်ကာပူတွင် ၂၀၂၁ ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ ၁၈ ရက်မှ ၂၀ ရက်အထိ Group Stage နှင့် Playoffs ဇန်နဝါရီ ၂၂ ရက်မှ ၂၄ ရက်တို့တွင်ကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။ ပြိုင်ပွဲကိုစင်ကာပူ၏ဆိုက်ဘာအားကစားနှင့် Online Gaming အသင်းနှင့်စင်ကာပူခရီးသွားဘုတ်အဖွဲ့၏ပံ့ပိုးမှုဖြင့်ပူးတွဲစီစဉ်လိမ့်မည်။ ပွဲကိုအော့ဖ်လိုင်းတွင်ကျင်းပမည်ဖြစ်သော်လည်းကမ္ဘာ့ချန်ပီယံရှစ်သည်ပရိသတ်နှင့်တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိဘဲပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်မည့်ဒေသများစွာအတွက်အစီအစဉ်များကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။ အသင်းများကိုကြေငြာရန်မရှိသေးပါသို့သော် Moonton ၏ထုတ်ဝေသည့်နောက်တွဲယာဉ်သည်စင်ကာပူအသင်းနှစ်ခုဖြစ်သော RSG နှင့် EVOS SG တို့ကိုအထူးသဖြင့်ပြသသည်။ ထို့ကြောင့်အသင်းနှစ်ခုသည်အိမ်ရှင်နိုင်ငံအားကိုယ်စားပြုရန်ဖိတ်ကြားခံရလိမ့်မည်။ Mobile Legends သည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာတည်ရှိမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုထိရောက်သောဂိမ်းဖြစ်လာသည်နှင့်အတူ Moonton တွဲဖက်တည်ထောင်သူနှင့်အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Justin Yuan သ